Mamwe madzimai emumisha yeHopley neEpworth anoti ave kurara mudondo nepamusana pekutyira hupenyu hwavo mushure mekubatwa chibharo nevanhu vaive vakapfeka mbatya dzemasoja.
Madzimai aya anoti kubva zvaitwa “shutdown” yakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, havana rugare.
Mumwe wemadzimai aya, uyo asina kuda kudomwa nezita rake sezvo achityira hupenyu hwake, anoti akavingwa nevarume vaviri vaive vakapfeka mbatya dzemasoja husiku ari mumba make, akabatwa chibharo.
Mukadzi uyu anoti akamanikidzwa kuita zvepabonde mushure mekurohwa, izvo zvakaita kuti angozvipira kubatwa chibharo vana vake vakatarisa.
Mumwe mudzimai ane makore makumi mana nemanomwe anorarama neHIV/AIDS anoti akabatwa chibharo varume ava vasina kuzvidzivirira, kunyange hazvo akange avaudza kuti anorarama neHIV/AIDS.
Mumwe mudzimai asina zvakare kuda zvakare kuburitswa zita rake, atiwo akasangana nevarume vaive muunifomu yemauto apo aiienda kuchitoro, akamanikidzwa kubata nhengo dzakavandika dzemumwe wevarume ava.
Mudzimai uyu anoti akamanikidzwa kutambisa nhengo idzi kudzamara hurume hwake hwabuda uho hwakamwayirwa kumeso kwake.
Mumwe mushandi werimwe remasangano ari kubatsira madzimai aya asinawo kuda kudomwa nezita achiti anotyira hupenyu hwake, anotiwo akakwanisa kuendesa madzimai aya kunowonekwa nana chiremba, uye vamwe vavo vakatopiwa mishonga yekudzivirira zvirwere zvepabonde.
Sangano iri rinoti rabatsira vakadzi vanosvika gumi nevana kubva kuHopley neEpworth.
Vana chiremba vakabatsira madzimai aya havana kudawo kuburitswa mazita avo, pamwe nenzvimbo yavanoshandira vachitiwo pari zvino zviri kuitika munyika zvinogona kuvaisa munjodzi.
Studio7 ine magwaro anoratidza kuti madzimai aya akaonekwa navana chiremba, avo vakavapa mishonga yekunwa zvichitevera kurohwa nekubhinywa kwavakaitwa nevarume vaive nepfuti vakapfeka zvakare mbatya dzechiuto.
Madzimai aya anoti haana kusvitsa nyaya iyi kumapurisa, achiti aityira hupenyu hwavo sezvo mapurisa ari kusunga vanhu vanenge vaenda kunomhang'ara kana kupotera kwaari.
Madzimai aya anoti akabatwa chibharo panguva iyo munyika maive nemhirizhonga zvichitevera kuratidzira kwemazuva matatu kwakange kwarongwa neZCTU.
Vanhu vanodarika chiuru chimwe chete, kusanganisira Pastor Evan Mawarire, mumiriri weMbizo muparamende, VaSettlement Chikwinya nemumiriri weMkoba muparamende, VaAmaos Chibaya, nevamwe vari mutirongo vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kumirira vazhinji vevanhu vakasungwa ava sezvo vazhinji vavo vasina mari dzekutsvaga magweta sezvo vasina kubayirwa zvitupa.
Pakatanga kuratidzira vanhu nemusi weMuvhuro, Ndira 14, 2019, hurumende yakadira mauto mumigwagwa senzira yekubatsira mapurisa kupedza mhirizhonga yaiitika panguva iyi.
Vanhu vakawanda vanonzi vakarohwa nekukuvara zvakaipisisa mumhirizhonga iyi, uye vanhu vanodarika gumi nevaviri, vakafa mumhirizhonga iyi.
Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti nhengo dzaro dzakarapa vanhu vanodarika makumi manomwe vaive nemaronda akakonzerwa nemabara epfuti.
Sangano iri rinotiwo vamwe vevanhu varakarapa vakaitwa maoparesheni ekubvisa mabara aive mumiviri yavo.
Mutauri wesangano iri, Dr Fortune Nyamande, vanoti nemamiriro aita zvinhu, zvava pachena kuti hurumende yeZimbabwe iri kukundikana kupedza mhirizhonga pasina ropa radeuka.
VaNyamande vanoti pasvika zvinhu pava kuda kuti masangano eUnited Nations, African Union, Southern African Development Community, nemamwe, apindire sezvo Zimbabwe iri kukundikana kuchengetedza kodzero dzevanhu.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vanoti hurumende inofanirwa kuongorora nyaya dzekubatwa kwevanhu chibharo nechimbichimbi.
Studio7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemasoja, VaOverson Mugwisi, kuti tinzwe divi ravo.
Asi munguva shoma yadarika, mutauriri wemapurisa, Amai Charity Charamba, pamwe nemutauriri wemasoja, vakaudza vatori venhau kuti vakabirwa maunifomu ayo vanofungidzira kuti ndiwo ari kushandiswa zvisiri pamutemo.